Shengxin Sports gacmaha la Youfa Group haya, iyo faa'iidooyinka ay midba midka kale la dhamaystiro lana dooni horumarka degdeg ah. - Shiinaha Tianjin Shengxin Sports Badeecadaha
Iyada oo horumar joogto ah heerarka dadka kuwa nool iyo kuwa soo sara ah xorta dhaqdhaqaaqa taam qaranka, wax soo saarka ee qalabka isboortiga sida xaqiiqada ah waxay noqon doontaa warshadaha qorrax ka soo baxa ah, iyo meel suuqa noqon doonaan qaar badan oo ka ballaadhan. wax soo saarka ugu weyn ee Youfa Group, tuubooyin bir welded, waa wax ugu weyn ee sida xawliga ah u qalab isboorti. Waxaa ka dhanka ah asalka this in Shengxin Sports iyo Youfa Group ayaa si guul gaari iskaashiga ku saleysan mabda'a ah complementarity labada dhinac, faa'iidada iyo faa'iido labada dhinac: Youfa Group ayaa maal Shengxin Sports oo uu leeyahay shaqaalaha maamulka oo waayo-aragnimo maamul hodan. Si ay u bixiyaan goobaha loogu ballaariyo hawlgallada, dhammaan tubooyinka birta looga baahan yahay Shengxin Sports waxaa lagu iibsaday ka shuraakada ah Youfa Group.
iskaashiga ee mashruucan uu yahay mid fursad Shengxin Sports in ay xoojiso xoog iyo kor loogu iman kara horumarinta iyo in ay si degdeg ah u horumariyaan ma aha oo kaliya. Sidoo kale waa isku day ah oo firfircoon oo waxtar by Chain Youfa Steel tuuboyinka Industry in uu webigu kordhiyo kana gala warshadaha qalabka isboortiga.
waqti Post: Jul-19-2018